Iingcali zengqondo ziqhubeka zithi abantwana, nokuba bancinci, bahlala becinezeleka. Unokukunceda njani iimvumba? U-Petya oneminyaka elilodwa uyakhala ngenxa yokuba akukho mama osondeleyo. Umhlengikazi uthi, umama usemsebenzini, kwaye uza kuza kusihlwa. Kodwa uPetya akayiqondi amagama akhe. Ngomntwana walesi sizukulwana, akukho ncamango yexesha. Enyanisweni, kuphela oko kwenzekayo ngoku. Ngoko ke, i-crumb iqhubeka ikhala ngokukrakra.
Ngelishwa , abantwana bethu banezizathu ezaneleyo zokuva uxinzelelo. Kwimfazwe eneminyaka emithathu kwi-sandbox ibangela ukuba sibe nemvakalelo engaphantsi kuneyethu - ukugxekwa kwintloko. Kwaye xa umntwana eqala ukukhala "ngaphandle kwesizathu" (njengoko abantu abadala becinga), mhlawumbi amava akhe ayenzulu njengethu, abangelwa ukuxabana nomhlobo wakhe othandekayo, nangona abantwana banenzuzo enkulu kakhulu kubantu abadala: umphefumlo womntwana, ixhomekeke kwimeko yolonwabo kwaye ilungele ukufumana izinto ezimangalisayo, kanti ngokuqinisekileyo silindele ubomi bokukhohlisa, nangona xa uxinzelelo "lukhupha" umntwana ngaphandle kovuyo, kulula ukuyibuyisela. Kuyimfuneko kuphela ukukunceda umntwana ukubaphazamise, ukusekela ulwalathiso olufanelekileyo ngqalelo yakhe-kunye nokuvumelana kuya kubuyela ngokukhawuleza. Kukho izinto ezininzi ezilula kwiiseshoni zokuqala zokubangela ezinceda abantwana (kunye nabantu abadala) ukuba banciphise uxinzelelo, ukufumana uxolo lwangaphakathi. Abancedisi abanoncedo kunye nabangenayo i-nonobtrusive kule ngqiqo banokuzikhethela kunye nezinto eziphathekayo. Iminwe yokusebenza, umntu uguqula inkqubo yesantya kwenye uhlobo lomsebenzi. Abantwana abakhulileyo banokwenza into ethile, bavakalise amava abo kunye ... bathetha kubo. Kwaye umntu omdala kulezi klasi uqala ukuziqonda kangcono, okukuvumela ukuba "uvumeleke" amava.
Kwi-psychotherapy, iiklasi zintlabathi zinomdla ozukileyo. Akusiyo nto into yokuba iibhokisi zebhodi zebhodi zentanga zigcwele abantu abanezigaba ezahlukeneyo zabantu abadala (kuquka nabamaMama, oomakhulu, oogogo kunye noomkhulu oomngcakaza banceda umntwana ukuba akhe into ethile). Ukudlala ngesanti kunokuguqulwa kwiseshoni ye-psychotherapy. Indlela yokulungiselela loo msebenzi? Into yokuqala yokwenza ukukwakha ibhokisi ubuncinane ubuncinane be-50x50 cm ngobukhulu ekhaya. Kwaye ukuba ixesha libekwe, lifake kwikhemitha okanye kwibhalkoni. Njengoko abaloloshe bathi, i-lifebuoy kufanele ilungiswe kwangaphambili, ngelixa ulwandle luzolile. Isiqhwithi sivame ukufika ngokungalindelekanga. Emva kokuba uqaphele ukuba umntwana ukhululekile kwaye akanako ukuzola. Ixesha lokufumana ibhokisi elifanayo kwaye uzalise ngesihlabathi. Nangona kunjalo, ungasebenzisa i-pelvis eqhelekileyo yomdlalo. Into ephambili kukuba kufuneka izinze kwaye ingaguquki ukuba umntwana uthatha isigqibo sokuxhoma kwicala layo. Ngoko, tshala entlabathi nge-atomizer, ukuze kubekho uthuli elincinane. Endaweni yesihlabathi, ungathatha umxholo oqhelekileyo. Nika umntwana wakho izitya ezimbalwa zeemeko ezihlukeneyo, makhe awathulule i-rump. Yaye i-spoon xa ukhathala ngokusebenza ngeminwe yakho. Okubaluleke nakakhulu ukuqokelela okusanhlamvu okwehlukeneyo kunye nemigca: i-buckwheat, ilayisi, i-millet, kunye neepayi kunye neententili. Konke olu butyebi lunomdla wokudibanisa nokudibanisa, ukutshintsha kunye nokudibanisa. Khumbula ukuba umonakalo ococekileyo unxweme okanye i-semolina. Basebenzisa izihlunu ezincinci zezandla, zisinceda ukuba sitshintshele "kwindlela yokuziphulukisa".
Isanti kunye nodongwe
Abazali abanengqondo benza izinto ezincedo, udongwe, iziqwenga zephepha lodonga, isanti, kunye nezixhobo zemvelo ezifana neengcawa, i-chestnuts, i-acorns, amajikijolo omisiwe, i-flower petals kwangaphambili ... I-arsenal enjalo ityebi iya kukuvumela ukuba ususe lula ukutshatyalaliswa kwabantwana.
Mhlawumbi umphumo obonakalayo usebenza nodongwe. Ukuqhekeza inqwaba enkulu yesayizi elungileyo, ufake i-ladle uze uthele amanzi. Xa udongwe lufumana umanzi omncinci, qalisa ukuyichukumisa, uguqe ngokuvumelana nokuba wena kunye nosana uthanda. Njengoko umkhuba ubonisa, abanye abantu bathanda ukuhambelana kokhilimu omuncu, omnye-ofana nodongwe. Iingcali zengqondo zithi: phezulu kwinqanaba lokuxinezeleka, izinto ezikhethileyo abantwana abakhethayo. Akunandaba nokuba i-apula ifakwe njengebhloko. Musa ukucima i-flight of fantasy! Enye into yokuba umntwana ngokwakhe ucela into yokulungisa. Ukuba iinjongo eziphambili zeeklasi zakho ziyi-psychotherapeutic, ukukhupha umthwalo, vumela umntwana ukuba asebenze ngokuzimeleyo, kwaye ke uhlale phantsi kwakho kwaye uqale ukukhangela into yakho.
Yilowo nalowo makathathe ingcezu yobumba okanye iplastiki kwaye ahlule kwiindawo ezininzi. Uya kufaka ifom. Ngaba usufumene into efana nomtshini wokubhala okanye umntu omncinci? Shintsha imveliso - uze uqedele umsebenzi womnye. Ngamanye amaxesha abantwana baziva bengakhuselekanga kwizakhono zabo, kwaye kulula ukuqhubeka nokusebenza kunokuqala ekuqaleni. Mane ubalekele isiluleko esinqabileyo: unikezela ukuthenga kwakho kumntu othembela kuye, kwaye kwiintlanzi, ukuzithemba kuphakama.
Abantwana banezinto ezizithandayo. Inhlama ingenakwenzeka, iyamnandi kumgca, ivumelekile ukuba ihlekise. Unokwenza izibilini, i-koloboks, amadoda amancinci nangona-umva wakho. Eyona ndlela inokukhetha - okokuqala ukuyikhanda oko intsana engayithandiyo (umzekelo, ubuso beentombazana ezithatha itekisi). Yaye emphefumlweni uyiphakamise ngomunwe wakho. Kwaye umama uya kubumba ukukhathala kwakhe? Yaye ke qhekeza uphephe! Le yonyango elihle. Okanye jonga ukuba ungatshintsha ntoni ebusweni bomfanekiso ofanayo, ukuze ube mnandi.
Izixhobo zokuphuhliswa komntwana wakho
Ukuhlolwa komntwana ukuya kunyaka ngugqirha
Indlela yokuzinzisa umntwana ongekho
Uncedo kwengqondo yengqondo kwiimeko zobunxila
Ngaba ndifuna ukuthatha amavithamini ngexesha lokukhulelwa?
Iqoqo leChanel Cruise eSeoul
Ubungakanani obufanele ukulala nomzimba
Umphefumlo ovela kwintsholongwane yenkukhu
Yiyiphi ingozi enokuthi i-taste enhancerers iilethe?
Umkhangeli wophendlo: indlela yokunyamekela kakuhle iilishi